Taariikhda - Cuntooyinka on wheels
Metro Meals on Wheels waxaa la aasaasay 1997 iyada oo ah urur ay leeyihiin barnaamijyo madax-bannaan oo Cunnooyinka Wheels ee Minneapolis/St. Aagga metro ee Paul si loo bixiyo taageerada loo baahan yahay si loo daboolo baahida sii kordheysa ee cuntada nafaqada leh ee guriga lagu keeno. Barnaamijyada Cunnada Taayirada waxay ka jireen Magaalooyinka Mataanaha in ka badan 40 sano. Metro Meals on Wheels waxaa la aasaasay markii barnaamijyada bulshada ku salaysan ay aqoonsadeen in samaynta urur, barnaamij kastaa uu ka faa'iidaysan karo iskaashiga u oggolaanaya inay wadaagaan kheyraadka guud.
Metro Meals on Wheels waxay u jirtaa inay bixiso farsamo muhiim ah, lacag ururin, fidin iyo iskaa wax u qabso shaqaale iskaa wax u qabso ah oo loogu talagalay 32 xubnood oo barnaamijyo ah. Cuntooyinka Lugaha Laydhka ee Minneapolis / St. Paul metro area wuxuu la kulmayaa baahi muhiim u ah in ka badan 6,800 waayeelka iyo dadka naafada ah iyadoo la siinayo nafaqeyn joogto ah, xiriir bulsho, isku xirka dadka qaata adeegyada kale ee guriga ku saleysan, iyo siinta nabada maskaxda macaamiisha, daryeelayaasha iyo qoysaska.
Metro Meals on Wheels waxay diiradda saareysaa bixinta taageerada iyo caawimaadda xubnahayaga, si ay u siiyaan adeegga ugu wanaagsan ee suurtogalka ah macaamiishooda. Adeegyadeenna waxaa ka mid ah:
Gargaarka maaliyadeed iyada oo loo marayo deeqaha la siiyo xubnaha
Kordhinta wacyiga bulshada ee Cuntooyinka Lugaha Lugta
Kheyraadka bulshada iyo adeegyada gudbinta
Fursadaha waxbarasho / tababar / macluumaad wadaagid ee socda
Isuduwidda / hirgelinta mashaariicda gaarka ah si loo caawiyo xubnaha iyo macaamiishooda
Iyadoo Minneapolis/St. Dadka waayeelka ah ee Paul ayaa la saadaaliyay inay si degdeg ah u koraan sanadaha soo socda, Metro Meals on Wheels waxay bixisaa adeegyada lagama maarmaanka ah si ay u caawiyaan barnaamijyada xubnaha si ay ula socdaan baahida bulshada sii kordheysa.